Nyocha Afọ Afghan - Reeddịrị
Nyocha Afọ Afghan
Kedu ihe bụ Afghan Hound?
Ndị Afghanistan si na otu hound, ma ọ bụ bụrụ ndị ziri ezi sitere na ezinụlọ ahụ na-ahụ anya, nke ha niile dị oke ọsọ, nkịta na-acha uhie uhie dị ka akụkụ.
Nkịta ndị Afghanistan dị site na 26 ruo 28 sentimita asatọ na akpọnwụ, ebe nkịta na-anọ 24 sentimita 26 n'ogologo. Weighmụ nwoke dị ihe dị ka kilogram 60, ma ụmụ nwaanyị tụrụ ihe dị ka kilogram iri ise n’arọ.
Ihe njide kachasị ejide nke Afghan mara mma bụ uwe ya, nke ogologo na silky ebe niile na nkịta ahụ, belụsọ na ihu na azụ, ebe ọ dị mkpụmkpụ ma na-egbu maramara.
Afọ ole ka ụdị ahụ dị?
Kedu ihe a na-akpọ Afghan ka ọ mee?
Kedu ihe ndị Afghanistan ji eme ihe taa?
Ọ dị mfe ịzụ?
Kedu agba ha na abata?
Ọ dị ha mkpa inwe mmega ahụ dị ukwuu?
Nwa nkịta Afghan ọ dị mfe housetrain?
Na ntutu niile a, ọ bụ na ọ naghị esiri ha ike ịhazi ha?
Ndị Afghanistan ọ bụla nwere nkwarụ mkpụrụ ndụ ihe nketa?
Olee otú obi dị ha?
Ndị Afghanistan ọ nwere ihe ọ bụla?
Ogologo oge ha a ?aa ka ha na-adị ndụ?
Ha di nma na umuaka?
Hà na-eri ọtụtụ nri?
Kedu ka onye Afghanistan si nwee ọgụgụ isi?
Ndi Afghan bu ndi ama ama?
Ebee ka m nwere ike ịmụtakwu banyere ndị Afghan?
Ndị Afghanistan dị elu dị ka ndị agbajiri agbaji n'ọhịa, na ịkpa ike nke ụdị, ntachi obi, mkpebi siri ike, na aghụghọ bụ akụkọ ifo. Ndị Afghanistan nwere ike ịgbaji okpukpu abụọ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ma ọ dịkarịa ala 35 ruo 40 mph wee gbanwee otu dime, nwere ike iburu ụkwụ 20 ma nwee ike ịwụnye ụkwụ 7 kwụ ọtọ site na ọnọdụ guzo.
Ọ bụ ezie na greyhound nwere ike ịnwe otuto maka ịbụ onye ọhụụ kachasị ochie, Afghan na Saluki anọghị n'azụ. N'ezie, ọ bụ ọkụkọ na akwa ajuju banyere nke n'ime ụdị abụọ ikpeazụ a buru ụzọ bịa.
O di nwute, ozi obula banyere oge ochie nke Afghanistan efuola na oge.
Na-enweghị mgbagha, ụdị abụọ ahụ dị ọtụtụ puku afọ na mmalite, agbakọtara iji mepụta anụmanụ kachasị mma maka ihu igwe na ala ịchụ nta. Ọdịda anyanwụ ụwa chọpụtara ndị Afghanistan na narị afọ nke iri na itoolu mgbe ndị agha Britain kpọghachitere ha ihe nlele mbụ na England.
Na mbu enwere uzo abuo nke Afghan: Ugwu a na-ekpuchi ekpuchi, nke na-adighi anya na udiri ala di omimi ma di nma ma buru uzo mara nma. Ejikọtara ala ịkpa na ụdị ugwu, na-emepụta Afghan anyị maara taa.
Ndị Afghanistan, Pakistan na ugwu India zụrụ ndị Afghanistan ka ha wee nwee egwuregwu gafee ugwu. Nke a regal hound bụ Premiya dinta agụ owuru; anụ oriri ya, ma ha ga-eweda ma ọ bụ jigide ya n'ihe ọ bụla ga-agba ha ọsọ.
Ndi nwe ala na ndi nwe obodo nwe ya ma oru ha bu ichebe obodo ndi ozo, itinye nri n'ime ite nri, ma obu nye ndi mmadu ndi mmadu ndi ozo.
Dị ka ndị na-achụ nta, a na-akwanyere Afghan Hounds ùgwù dị oke egwu. Ọ bụ ezie na a na-ejide nnụnụ ndị eze n'ụlọ mkpọrọ, nkịta obodo dị obere ma bụrụ ndị maara nke ọma ịkwado onwe ha.
A na-esokarị nkịta na-efe Falcons mgbe ha na-achọgharị azụ. Nkịta na-agba ọsọ na nkwado ma ọ bụ naanị ya na anụ ọ bụla, dabere na ike nkịta ọ bụla.
E nwere ụfọdụ akụkọ akaebe nke ndị Afghanistan na-agbada agụ owuru naanị, na-ejide nwamba ahụ n'olu n'elu ubu ma na-atarịta azụ site na spain maka igbu.
Taa, a na-edebekarị Afghan dị ka anụ ụlọ, ebe ọ bụ na nkịta na-egwu egwuregwu na nkịta adịghịzi na-ewu ewu. Na mba ụfọdụ ka amachibidoro iwu kpamkpam. Ndị Afghan bụ ndị hụrụ n'anya nke nkịta na-egosi na ụwa na mkpọchi ha na-enweghị isi, ha siri ike iti dị ka ndị ngosi.
Afghanfọdụ ndị Afghanistan nwere obi ụtọ nwere ndị nwe ha nke na-ewere ha iji aghụghọ, egwuregwu nke na-eme ka ịchụ nta maka ịhụ ụzọ. Mgbe onye Afghanistan kpebiri n'ezie na ọ na-amasị nrubeisi, ọ ga-arụ ọrụ kacha mma.
Mba, ha abụghị. Onye Afghanistan bụ onye na-eche echiche n'efu. Nke a bụ ihe dị mkpa na nkịta bred ka ọ gafere nnukwu nwamba. Ndị Afghanistan nwere ike ịfefe ihe ọ bụla na okwute na ala na-enweghị atụ, ma na-ahapụkarị onwe ha na 'njide' ahụ. Ọ bụ ezie na onye Afghanistan nwere ọgụgụ isi na aghụghọ, ọ ga-eji nke a mee ihe maka ọdịmma ya.
Ihe ị ga - eme bụ ime ka onye Afghanistan gị chee na ihe ọ bụla ịchọrọ ka ọ mee bụ n’echiche nke aka ya, wee too ya maka ịbụ onye nwere ọgụgụ isi. Ndị Afghanistan anaghị etinye aka na usoro ọzụzụ siri ike ma ọ bụrụ na a na-emeso ha ihe n'ụzọ siri ike, na-ajụkarị ịjụ ịmeghachi mmega ahụ ọzọ.
Onye Afghanistan nwere ike ịbụ onye ntị chiri nke ọma mgbe a gwara ya ka o mee ihe ọ na-eche na ọ nọ n'okpuru ya. Ha nwekwara ike bụrụ ihe okike dị ịtụnanya mgbe ha na-erube isi, nke na-ewute ndị nwe asọmpi.
Ndị Afghans bịara na agba niile mana ntụpọ, mana akara ọcha ma ọ bụ ọcha, ọkachasị na ihu, na-agbarụ ihu. Colorsdị agba agba dị iche iche bụ oji, oji na tan na-acha ọbara ọbara. Otu n’ime ihe ndị Afghanistan na-enye aka bụ egwurugwu ọ nwere ike ịbịa mma!
E wezụga agba ndị a na-ahụkarị, e nwere grays ndị na-acha anụnụ anụnụ, ndị na-acha odo odo, ndị na-acha anụnụ anụnụ, ude ọlaọcha, na ngwakọta dịgasị iche iche, ha nile nwere ma ọ bụ na-enweghị mkpuchi.
Otu n'ime agba ndị na - adịghị ahụkebe bụ 'domino,' ebe agba agba nkịta dị nro karịa akwa ahụ nke nwere mkpuchi nkpuchi gbara ọchịchịrị na-amalite n'anya, dị ka mmetụta Mickey Mouse.
Na agba niile, anya anya, egbugbere ọnụ, na imi akpụkpọ ga-agba ọchịchịrị na agba. Naanị mkpụrụ okwu na-acha uhie uhie n'akụkụ kaleidoscope nke agba ndị Afghan nwere ike iyi.
Ọ bụ ezie na onye Afghanistan nọ n'ụlọ nke ukwuu n'ihe ndina na-ekiri TV, ọ chọrọ nnukwu mmega ahụ ma ọ bụ na ọ ga-agwụ ya ike. Onye Afghan guru ike nwere ike imebi ulo na ihe di n'ime ya.
Ogba a yiri pusi ga-emeghe drọwa ma wepụ uwe ime gị niile maka ezigbo ịta, rịgoro na tebụl iri nri iji gafee squir n'èzí windo ma ọ bụ zuo nri abalị a n'elu ngwa nju oyi.
Site n'agba ha dị ike, ha nwere ike ịmachi site na oche oche n'oge obere oge. Ogige a gbachiri ogige dị mkpa bụ ihe dị mkpa, ebe ọ bụ na ndị Afghanistan nwere ike ịgbanye ọsọ ọsọ ruo 12 mph ruo ọtụtụ awa na njedebe ma gharakwa iku ume.
Mba, ha abụghị. Agbanyeghị na ọ dabere na pup nke ọ bụla, dịka iwu onye isi Afghan anaghị enwe mmasị ịgwa gị ihe ị ga-eme. Ruo ọnwa isii ndị Afghanistan enweghị ike ịtụ anya na ha ga-adị ọcha n'ụzọ zuru oke, ebe ha tozuru oke ijide ruo ogologo oge.
Mgbe ị na-azụ ndị Afghanistan ọ bụla, a chọrọ ndidi na ịdị nwayọọ. Sensedị ọchị na-enyekwara aka.
Ee, iji ejiji bụ ọrụ dịịrị ezinụlọ nke a ga-agarịrị kwa izu. Ndị Afghanistan chọrọ ịsa ahụ kwa izu na ahịhịa iji gbochie uwe ahụ dị egwu ịghọ ihe nwute, ọgbaghara.
Kpụrụ uwe ahụ na-amalite n'ụzọ nkịtị. Pups anaghị adịkarị ka onye nwe ụlọ ọhụrụ na-atụ anya ya, ebe ọ bụ na ha adịghị ka ndị okenye toro ogologo. A na-amụ ụmụ pupụrụ Afghans n’ụzọ dị nro. Okpukpo nkịta nkịta na-eto nwayọọ nwayọọ.
Ihe dị ka otu afọ, uwe ndị okenye na-agbatị na-amalite igosi onwe ya na akwa nwa nkita ahụ malitere ịda, oge ụfọdụ ọ na-ewere ruo mgbe nkịta ahụ gbara afọ atọ tupu ọ laa.
Nke a bụ oge mgbe nlekọta uwe na-aghọ ihe nro, dị ka nkịta nkịta na-ata ahụhụ na ute na uwe na-agba agba. Petfọdụ ụmụ anụmanụ Afghan na-egbutu onwe ha n'oge a, dịka onye nwe ya na-ada mbà.
Okenye Afghans nwere ike ịwụfu n'oge opupu ihe ubi wee daa mgbe ọrịa na obere nkịta na-enweghị atụ ga-efunahụ uwe mgbe oge ọ bụla gasịrị. Ndị na-azụ azụ akọ na uche ga-akọwa mgbe niile ihe mgbagwoju anya nke nlekọta uwe dị mma na ndị niile na-enye ndị nwe ụlọ nkuzi nkuzi.
Ndị Afghanistan na-arịa ọrịa na-adịkarị mfe nje, etuto na ọrịa anụ ahụ, yabụ ịkpachara anya na mkpuchi uwe dị ezigbo mkpa.
O di nwute, ha na-eme mana ha adighi adi mfe karie udiri anumanu ndi ozo. Enwere ike ịchọta dysplasia hip, cataracts nke ụmụaka, hypothyroidism na enzyme na ụdị. N’izugbe, ụdị a bụ nke siri ike.
Ndị Afghanistan nwere ike ịgba ọsọ site na obi ike gabiga oke ihere, na nke a nwere ike ime n'etiti ndị amụrụ n'otu ebe. Mgbakwunye mmadụ dị ezigbo mkpa na ụdị a, ebe ha nwere ike bụrụ ezigbo anụ ma ọ bụrụ na a hapụrụ ha onwe ha.
Na mkpokọta, ndị Afghan nwere ike iguzosi ike ma na-echekwa ndị bịara abịa mgbe ụfọdụ. Omume ha dị elu na nke eze na-eme ka ha bụrụ nkịta na-egbochi. Ha ga ahọrọ ndị enyi ha, dị ka nwamba ga-ahọrọ.
Gburugburu ezigbo ndị enyi ya, ndị Afghan gosipụtara akụkụ ya na-atọ ọchị, isi ike na ihe egwu.
Site na nnukwu ụgbọala ha ga-eri, ndị Afghanistan ga-achụso ma zipu ihe ọ bụla na-esite na ha ma ghara ikwe ka ọ gbaa ọsọ. Ọ bụrụ na a zụlitere ya na enyi enyi, Afghan nwere ike ịtụkwasị obi na pusi ụlọ, mana ọ ka ga-achụkwa onye ọ bụla ọzọ.
Ke ofụri ofụri, Afghans bụ quirky na pụrụ iche ìgwè, ma e nwere otu akụkụ nke Afghan agwa na-elegharakarị anya. Afghan Hound bụ ndị ohi n'obi ma wepụta ihe ọ bụla ga-adọrọ ha mma.
Ha nwere ike ịbụ ihe ọhụrụ na ịbanye ebe ndị nwe ha chọrọ igbochi ha, na ikike ha ịkụ nri ma ọ bụ isiokwu pụọ n'okpuru imi onye nwe ha bụ ihe anwansi. Onye nwere ọgụgụ isi ga-enyocha ụlọ ya nke ọma ma debe otu nzọụkwụ n'ihu nke Houdini a.
Mgbe onye Afghanistan hụrụ onwe ya na ọnọdụ nsogbu, mgbe mgbe ọ ga-ehi ụra ruo mgbe azụmahịa niile gwụchara. Ihe ịrịba ama ọzọ doro anya nke nkịta nwere obi ụtọ ma ọ bụ ụjọ bụ imi imi.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe agaghị ekwe omume ịhapụ onye Afghanistan pụọ na arịa ụlọ a tụrụ atụ. O yiri ka ha na-eche na nke a bụ ọnọdụ kwesịrị ha.
A maara ha ka ha na-ebupụ ndị nwe ha n'àkwà. Nye ezi ndị na-eche echiche Afghan, ọ nweghị ihe a ga-eji dochie anya nwayọ a, obi ụtọ, nkụda mmụọ na ọtụtụ nkịta nkịta.
Maka otu buru ibu, ndị Afghanistan na-adị ndụ ogologo oge. Afọ iri na abụọ ruo iri na anọ abụghị ihe ọhụrụ, ma amaala ụmụ anụmanụ dị afọ 18. Ndị Afghanistan na-arịa ọtụtụ mkpesa geriatric nke ụdị anụ ọhịa ndị ọzọ na-enweta, dị ka adịghị ahụ ụzọ na ịnụ ihe, na ọrịa ogbu na nkwonkwo. Ọrịa cancer na ọrịa obi na-egbukwa ụdị ìgwè a.
Mgbe ụmụaka bụ akụkụ nke ihe osise a, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịkụziri ma ndị Afghanistan ma nwatakịrị nkwanye ùgwù na otu esi eme omume na ibe ha. Ndị Afghanistan bụ ndị nwere mmetụ na-emetụ n'ahụ ma nwee ọkụ na-enwu ọkụ.
Ha dịkwa jụụ ma nwee ndidi, nwekwa oke ọgụgụ isi. Mgbe nlebara anya gwụrụ Afghan, ọ ga-eme onwe ya ụkọ, na-alaghachi ebe ndị mmadụ na-ehi ụra.
Dika ndi Afghan bu kariri nke nkita toro ogologo, ha na eri ihe pere mpe karia nha ha. Ndị Afghanistan chọrọ nri nkịta dị mma, yana ọtụtụ mmanụ ihe oriri iji nọgide na-ele ma na-enwe mmetụta kachasị mma.
Ọ dịkwa mkpa iji chekwaa ntị ogologo ndị ahụ na snoods. Hatsdị okpu ndị a na-echekwa ụdị a na-ejide ntị na efere na Afghan ahụ na-agba ọsọ adịghị agbanye ntutu isi ya.
Otu akwukwo a na-ewu ewu ugbu a mere ka ndi nwe obodo Afghanistan nwee obi uto mgbe o kwuru na ndi Afghanistan nwuru anwu ikpeazu n'ime akwukwo ya 'na-aru oru'.
Na-arụ ọrụ ọgụgụ isi nwere ihe ọ bụla na-eme na n'ezie 'smartness' nke ọ bụla ìgwè. Edsdị ndị ahụ mepụtara iji soro mmadụ na-arụkọ ọrụ, n'ezie, ga-adịkwu mfe maka ọzụzụ karịa Afghan dị nkọ, onye ọrụ ya bụ ịnagide anụ ọ bụla dị ize ndụ n'onwe ya, na-adabere n'echiche nke onwe ya iji hụ ya ka ọ dịrị ndụ ma na-achụ nta ụbọchị ọzọ.
Ndi Afghan nwere ubochi hey na mbubreyo sixties na mmalite nke iri asaa. Site n'oge ahụ rue oge a, ụdị a dabara na nhọpụta ndị na-ewu ewu ma ugbu a, ọ nọ gburugburu ebe iri isii, ma na Canada ma United States. Maka otu ụdị dị mkpa maka ụdị nke onye nwe ya pụrụ iche, nke ahụ adịghị njọ.
Enwere ọtụtụ akwụkwọ magburu onwe ya dị na ụdị. Imirikiti ọba akwụkwọ na-ebu otu aha ma ọ bụ ọzọ mana ọ bụrụ eziokwu, na ahụmịhe aka, a na-atụ aro na ndị nwere ike ịbịa ihe ngosi nkịta na-agwa ndị okike okwu.
Ndi Afghan Hound Club nke Canada, ndi otu ulo oru ndi ode akwukwo ha bu Debbie Hodgins, nwere ike ịkpọtụrụ na PO Box 60, Hanley, Sask., S0G 2E0, Canada abughi nani ijere ndi na-acho oge ochie aka kama iji nyere ndi ohuru aka.
Onye ibe anyi nke America, Afghan Hound Club of America nwere ike iru site na Nwada Norma Cozzoni na 43W612 Tall Oaks Trail, Elburn, IL 60119, USA.
Shetland Sheepdog Nkịta Nzuzo Ozi
Ndi Corgi Alaskan Malamute gwakọtara ngwakọ kacha mma maka gị?
ọkara ọlaedo retriever ọkara cocker spaniel
kedu ihe igwe ọkpọ ọkpọ yiri
kedu ihe ngwakọta ụlọ ọzụzụ atụrụ German na -adị